Iran urges dialog between warring sides to Zimbabwe crisis, condemns bomb blast in Afghanistan
Iran has called on opposite sides to the political crisis in Zimbabwe to resolve their problems through peaceful means within the framework of the country’s constitution.
According to Press TV, Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi said on Thursday Iran “is carefully monitoring all developments” in Zimbabwe which has seen the military seize power and place President Robert Mugabe under house arrest.
Tehran “wants all the parties involved in recent events to resolve the problems through dialogue and peaceful means, within the framework of the constitution and democratic process, free of any violence or resort to force and on the basis of the wishes and interests of the people of Zimbabwe,” he said.
Earlier this week, Zimbabwe’s military deployed armored vehicles to the streets of the capital, Harare, and seized control of the southern African nation.
On Thursday, Zimbabwe’s opposition Leader Morgan Tsvangirai demanded the resignation of President Mugabe who is kept under house arrest with his wife.